CVE Series Permanent Magnet Inopindirana Inverter Centrifugal Chiller
Yekumusoro-kumhanya zvachose magnetic synchronous inverter mota
Iyo yekutanga simba repamusoro-soro uye yekumhanyisa PMSM inoshandiswa kune ino centrifugal chiller. Simba rayo rakakwirira kudarika 400 kW uye kumhanya kwaro kutenderera kuri pamusoro pe18000 rpm. Kugona kwemotokari kuri pamusoro pe96% uye 97.5% kusvika pakukwirira, kukwira kupfuura yenyika yegiredhi 1 chiyero pane mota yekuita Iyo compact uye yakapepuka. 400kW inomhanya-mhanya PMSM inorema zvakafanana ne75kW AC induction mota. Nekutora inonamira refrigerant pfapfaidzo kutonhora tekinoroji kutonhodza pasi stator uye rotor, mota tembiricha inogona kudzorwa panenge 40 ℃, kuona inoshanda kushanda.
Yekumhanya-mhanyisa mota yakananga-inotyairwa-maviri-danho impellerChikwata chinogamuchira yakakwira-mhanyisa mota yakananga-inotyairwa-maviri-danho impeller. Yekumhanyisa-magiya uye maviri eredhiyo mabheyari akamiswa, ayo anovandudza kushanda pamwe nekuderedza michina kurasikirwa neinenge 70%. Iine yakananga kutyaira uye yakapusa dhizaini, compressor inoshanda zvakavimbika mudiki saizi. Vhoriyamu uye huremu hweiyo compressor inongova 40% yeiyo imwechete chinzvimbo chinowanzoitika compressor. Pasina iyo yepamusoro-frequency ruzha rwekumhanyisa-magiya, yekushandisa compressor ruzha rwakanyanya kuderera. Iyo ndeye 8dBA yakaderera pane yakajairwa unit.
Yese-mamiriro "wideband" pneumatic dhizaini
Impeller uye diffuser zvakagadziriswa kuti zvione kushanda kwepamusoro kwecompressor pasi pe25-100% mutoro. Inofananidzwa neyakajairika dhizaini iyo yakavakirwa pane izere mutoro mashandiro, dhizaini iyi inogona kudzora kompressor's kugona kudzvanywa. Yakajairika inverter centrifugal chiller inoziva kugona kwesimba neiyo inoshanduka kumhanya kwecompressor uye inoshanduka yekuvhura kona yemutungamiriri vane inotanga kudzikira pasi pasi pe50 ~ 60% mutoro. Nekudaro, Gree CVE akateedzana centrifugal chiller inogona kushandura zvakananga kumhanya kwecompressor pasi pe25 ~ 100% mutoro kudzora kupunzika kurasikirwa kweyeye vane gwara uye kugadzirisa mashandiro ekushanda pasi pemamiriro ese.
Yakaiswa sine-wave inverter
Nekutora chinzvimbo-chisina sensor yekudzora tekinoroji, mota irori inogona kumisikidzwa isina kuongorora. Iine PWM inodzora kugadzirisa tekinoroji, inverter inogona kuburitsa yakatsetseka sine wave yekuvandudza mota kugona. Inverter yakaiswa zvakananga pauniti, ichichengetedza nzvimbo yepasi yevatengi. Pamusoro pezvo, tambo dzese dzekutaurirana dzakabatana mufekitori kuvandudza kuvimbika kwechikwata.
Yakadzika viscosity vane diffuser
Yakasarudzika yakaderera viscosity vane diffuser dhizaini uye airfoil gwara vane vane inogona kutenderedza yakakwira-mhanyisa gasi kuita yakakwira static yekumanikidza gasi zvinobudirira kuti uone kudzvanywa kupora. Pasi pemutoro wakasarudzika, vane diversion inoderedza kudzoka kwekudzikira kurasikirwa, inovandudza chikamu mutoro mashandiro, uye inowedzera chiyero chekushanda kweyuniti
Matanho maviri-ekumanikidza tekinoroji
Zvichienzaniswa neyese-nhanho firiji system, maviri-danho kumanikidza inovandudza kutenderera kushanda ne5% ～ 6%. Compressor kutenderera kumhanya kunodzikiswa kuitira kuti compressor iwedzere kuvimbika uye yakasimba.
Yakakwira-inoshanda hermetic impeller
Compressor impeller is ternary hermetic impeller, iyo inoshanda zvakanyanya uye yakavimbika pane isina kuvharirwa impeller. Inotora airfoil 3-dimensional mamiriro kuitira kuti iwedzere kugadzirisa. Kuburikidza neyekupedzisa element element, 3-kuronga kuongorora muchina, simba bvunzo bvunzo, pamusoro-kumhanya bvunzo uye chaiyo bvunzo pasi pechokwadi mamiriro ekushanda, inoitwa chokwadi chekuti impeller inosangana nedhizaini dhizaini uye inokwanisa kugadzikana kushanda. Impeller uye yakakosha shaft inotora isina kubatana kubatana, iyo inogona kudzivirira kusashushikana kushushikana uye rotor yekuwedzera off-muyero iyo inokonzerwa nekiyi yekubatanidza, nekudaro ichivandudza compressor yekushanda kugadzikana.
Yakakwira-inoshanda kupisa exchanger
Kupisa kupisa pamusoro kwakagadzirwa zvichibva pamhepo-yekuchinjisa mashandiro. Yakagadziridzwa kudzikisa kuyerera kwekumanikidza kurasikirwa uye kushandiswa kwesimba. Sub-inotonhorera yakashongedzerwa pazasi pe condenser. Iine yakawanda kuyerera inoyerera, yepasi-kutonhora degree inogona kusvika ku5 ℃. Middle yekuzviparadzanisa bhodhi inotora mwenje pombi iyo yakapetwa kaviri seyakaiswa mutopota pombi kuti ibatanidzwe nekutsigira bhodhi, nokudaro, pombi yemhangura haizokuvadzwa pasi pemhedzisiro yeiyo-inomhanya firiji. 3-V yakatemerwa chubhu ndiro dhizaini inogamuchirwa kuti ive nesimbiso yekuita
Yepamberi yekudzora chikuva
Yakakwira-kuita 32-bit CPU uye DSP yedhijitari chiratidzo processor inoshandiswa. Iyo yakakwira data kuunganidzwa kwakaringana uye dhata yekugadzirisa kugona inovimbisa iyo chaiyo-nguva chimiro uye kurongeka kweiyo system kutonga. Pamwe pamwe neakajeka LCD yekubata skrini, mushandisi anogona kuona nyore auto kudzora uye manyore kudzora mukugadzirisa. Iyo zvakare inotora yakangwara Fuzzy-PID komponi yekudzora algorithm, iyo inosanganiswa nehungwaru tekinoroji, fuzziness tekinoroji uye yakajairwa PID yekudzora algorithm, kuti iyo system inokwanisa kukurumidza kupindura kumhanya uye kugadzikana kuita.
Pashure: Kamwene Diffuser
Zvadaro: Nyowani Mhepo Disinfection Bhokisi reHVAC Sisitimu
Maindasitiri Chiller System
Screw Chiller Sisitimu
Mvura Chiller System